I-IMOBA 2022 Apk Entsha Ukulanda Kwe-Android [ML Injector] - I-Luso Gamer
Imidlalo ye-MOBA iyadlalwa futhi iyathandwa emhlabeni jikelele. Noma sinesiqiniseko sokuthi abadlali abaningi begeyimu ye-MLBB bafuna indlela eyiqiniso yokujova ama-hacks ahlukene. Ngakho-ke uma sicubungula intshisekelo yabadlali kanye nendlela evikelekile yokujova lapha silethe I-IMOBA 2022 entsha.
Eqinisweni, lokhu ikakhulukazi Injector ihlelwe igxile kubadlali begeyimu ye-Mobile Legend Bang Bang. Injongo yokuhlela uhlelo lokusebenza ukunikeza indlela evikelekile. Lapho ukuvinjelwa nezinye izinkinga zokuthola zisuswa khona unomphela.
Nakuba ngezansi lapha sizochaza zonke izinyathelo ezibalulekile ezihlanganisa inqubo yokufaka nokusetshenziswa kwesicelo. Nokho sizophinde sichaze amanye amaqhinga abalulekile ukuze sigweme inkinga yokuvimba. Uma uzimisele ukujabulela izici ze-pro zethuluzi bese ulanda I-IMOBA Entsha Ingxenye 54.
Yini okusha IMOBA 2022 Apk
I-IMOBA 2022 entsha iyithuluzi le-MLBB lenkampani yangaphandle eliku-inthanethi elakhiwe onjiniyela abangaziwa. Siyabazi onjiniyela kanye nabantu abagqugquzela lokhu kutholwa okuhle kakhulu. Nokho ngeke kulunge ukudalula igama lakhe ngaphandle kwemvume.
Uma sibheka imininingwane ehlanganisa nokukhathazeka okubalulekile okukhonjiswa abadlali bamageyimu. Sithole eziningi zezinkinga ezibalulekile ezahlukene abadlali abangahlangabezana nazo ngenkathi bezisebenzisa. Inkinga yokuqala neyinhloko yokusebenzisa amathuluzi anjalo wesithathu ukuvinjelwa unomphela.
Isizathu sokuthatha usizo emithonjeni yezinkampani zangaphandle kungenxa yokuncintisana okuqinile. Ngaphezu kwalokho, iningi lezinsizakusebenza ezifaka Izikhumba Nemiphumela zibekwe esigabeni se-premium. Okusho ukuthi ngaphandle kokutshala imali yangempela, akunakwenzeka ukuzuza lezo zinto.
Izindleko zangempela zokuthola lezo zinto zingase zidlule amakhulu amaRandi. Ngisho nabadlali bayahlanya mayelana nalezi zikhumba zikaKhisimusi kanye nemithelela. Ngakho-ke ufuna umthombo we-Android osekelwa inkampani yangaphandle. Bese sincoma ukuthi labo bafake I-IMOBA Entsha Ingxenye 54 ye-Android.
Usayizi 10.7 MB
Igama lephakheji com.mlbb.imoba
Uma sibheka imininingwane ebalulekile okuhlanganisa nezinsiza okufinyeleleka kuzo ukuze zijove. Lezo zici ze-pro zihlanganisa Zonke Izikhumba, Ukubuka Kwe-Drone, Yonke Imithelela kanye Nemenyu Eningi njll. Sikhohlwa ukusho ngale nqubo enkulu ye-Anti-Ban efinyelelekayo.
Phambilini sixoxe ngenqwaba yabadlali abakhombisa lokhu kukhathazeka okukhulu mayelana nenkinga yokuvinjelwa. Izivumelwano zokuphepha zeseva yokudlala zibuyekezwa njalo. Lokhu kusho ukuthi uma amaseva ephumelela ukuthola umsebenzi ongekho emthethweni.
Bese labo banikezwa inketho egcwele yokuklelisa i-akhawunti yokudlala kanye nedivayisi phakathi kwamadivayisi avinjelwe. Uma idivayisi ivinjelwe kanye, ngakho-ke akunakwenzeka ukuhlehlisa inqubo. Manje ukunika amandla i-Anti-Ban kanye ne-Anti Cheat kuzosusa zonke lezo zithiyo.
Ukwengeza okujabulisa kakhulu yizikhumba zikaKhisimusi. Labo ngoClaude, Eudora, Freya, Karina, Lancelot, Fanny, Gord, Zilong, Odette, Miya kanye ne-Updated Hero Karrie njll. Khumbula ukuthi zonke izinto ezishiwo ziyafinyeleleka ukuze zijove.
Ukwenza lokho, abadlali bamageyimu bayacelwa ukuthi balande inguqulo yakamuva ye-IMOBA Entsha Ingxenye 54 ML kusukela lapha. Manje faka uhlelo lokusebenza oluthile ngaphakathi kwe-smartphone ye-android. Futhi jova ngokuphephile Izikhumba Nemiphumela ye-premium engapheli okuhlanganisa iqoqo likaKhisimusi mahhala.
Ithuluzi lohlelo lokusebenza likhululekile ukulanda.
Ukufaka ithuluzi kunikeza iqoqo elingapheli lezinto ze-pro.
Lokho kufaka phakathi izikhumba, imiphumela, i-Drone View kanye nemenyu eyengeziwe.
I-Ant-Ban ne-Anti-Cheat nazo ziyafinyeleleka.
Isiteshi esivikelekile sihlinzekelwe ngomjovo.
I-interface yamathuluzi igcinwe ilula.
Ungayilanda Kanjani I-IMOBA 2022 Apk
Uma kuziwa ekulandeni inguqulo yakamuva yamafayela e-Apk. Abasebenzisi be-android bangathembela kuwebhusayithi yethu, ngoba lapha kuwebhusayithi yethu sinikela ngamafayela ayiqiniso kuphela. Ukuqinisekisa ukuthi abasebenzisi bazojatshuliswa ngomkhiqizo olungile.
Siqashe ithimba lochwepheshe elakhiwe ochwepheshe abahlukahlukene. Ngaphandle kwalapho ithimba liqinisekile mayelana nokusebenza kahle kwefayela le-Apk. Asilokothi sinikeze i-Apk ngaphakathi kwesigaba sokulanda kubadlali bamageyimu be-android. Ukulanda inguqulo yakamuva ye-IMOBA Injector sicela uchofoze isixhumanisi esinikeziwe esingezansi.
Noma singaqiniseki ngenqubo kodwa ukuthatha usizo lwamathuluzi ezinkampani zangaphandle ngaphakathi kokudlala akukho emthethweni. Ngisho namanje izigidi zama-akhawunti amageyimu zivinjelwe. Nokho onjiniyela bafaka izindlela zokuphepha ezihlukene, basafaka futhi bajove izici ze-pro ngokuzifaka wena engozini.
Kuze kube manje inala amanye Amathuluzi Wokujova we-ML ashicilelwe lapha kuwebhusayithi yethu. Ukuze uhlole lawo mathuluzi ahlobene sicela ulandele izixhumanisi. Okukhona IMEOW IMLS Apk futhi IPapskie Injector Apk.
Ungumlandeli omkhulu we-Mobile Legend Bang Bang, kodwa awukwazi ukuqhubeka ngenxa yezinsiza ezilinganiselwe kanye nokuntuleka kwamakhono. Khona-ke ungakhathazeki ngoba lapha silethe lesi sixazululo esihle kakhulu. Manje ukufaka Ukulanda Okusha kwe-IMOBA 2022 kuzosiza ukujova Izikhumba Nemiphumela yamahhala ngaphakathi kwegeyimu.
Izigaba Amathuluzi, Apps Amathegi IMOBA 2022 entsha, Okusha IMOBA 2022 Apk, Ukulanda okusha kwe-IMOBA 2022, I-IMOBA Entsha Ingxenye 54 ML Imeyili kwemikhumbi